Fiteny manan-danja indrindra any India | Fitsangatsanganana tanteraka
maruuzen | 17/06/2021 22:01 | Nohavaozina amin'ny 17/06/2021 23:02 | India
India izy no iray amin'ireo firenena lehibe indrindra sy be mponina indrindra manerantany. Manana mihoatra ny Mponina 1.400 tapitrisa ary izy no firenena fahafito lehibe indrindra eto an-tany. Tena goavambe. Ary eny, be dia be ny olona miteny amin'ny fiteny maro, raha ny marina, manontany tena isika ... inona izany ireo fiteny manan-danja indrindra any India?
Fiteny mihoatra ny roapolo no ampiasaina eto amin'ny firenena satria misy faritra maromaro, saingy afaka manao lisitra fohy kokoa isika ary mandamina izany amin'ny lisitry ny fiteny manan-danja indrindra. Noho izany, azontsika atao ny mampihena azy ireo hatramin'ny 10.
Manomboka amin'ny ny fiteny malaza indrindra rehetra ary ilay miteny ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny firenena. Kajy izay 336 tapitrisa ny olona miteny Hindi. Izany dia maneho ny 40% -n'ny totalim-pirenena, koa noho ny fahamaroan'ny mpandahateny dia iray amin'ireo fiteny roa manana ny toerany "ofisialy".
Ny Hindi dia miteny amin'ny Rajasthan, Uttarakhand, Delhi na Bihar, ohatra. Ny Hindi dia fiteny iray izay azo nakarina avy amin'ny fitenim-paritra tenenina tany amin'ny sy manodidina an'i Delhi tamin'ny andro taloha. Talohan'ny fanamarinana azy teo amin'ny fitenim-paritra Delhi dia nisy karazany hafa, fa nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka nivoatra sy nanjary nalaza kokoa ny Hindi maoderina rehefa noraisin'ny mpanjanatany britanika ho lingua franca.
Androany no fiteny ofisialy any amin'ny fanjakana sivy sy faritany telo ary, araka ny nolazainay, dia iray amin'ireo fiteny nasionaly ofisialy (anglisy ny iray).
Izany no fiteny faharoa be mpiteny indrindra any India ao ambadiky Hindi. Inoana fa 8% -n'ny mponina no miteny izany ary avy eo Mpandahateny 83 tapitrisa izay mifantoka indrindra amin'ny fanjakana atsinanana amin'ny firenena.
Io fiteny io dia nivoatra 1300 taona mahery, fa ny endrika ankehitriny dia nipoitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. ankehitriny no fiteny ofisialin'i Bangladesh Ary na dia be mpampiasa aza izy io any amin'ny faritra sasany any India, dia misy vitsy an'isa ihany koa ao amin'ny tanàn-dehibe Indiana toa an'i Delhi, Mombai na Varanasi.
Heverin'ny manampahaizana manokana izany fiteny faharoa faran'izay tsara indrindra eran'izao tontolo izao ao ambadiky ny frantsay, ary ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-dreny dia mifototra amin'ny fiteny bengali.
Ny fiteny Telugu dia ampiasaina Olona iray tapitrisa 82 any India, manodidina ny 7% amin'ny totalin'ny mponina. Hitanay manokana izany any amin'ny fanjakana atsimo toa an'i Telangana, Nosy Nicobar, Pradesh na Andaman.
Manana ny mampiavaka azy fa izy irery no fiteny any amin'ny faritra atsinanan'izao tontolo izao ny teny rehetra miafara amin'ny zanatsoratra. Misy vondrom-piarahamonina miteny sinoa be dia be any Etazonia ary mitombo hatrany izy io.
Zava-misy mahafinaritra: Ny abidia Telugu dia heverina ho abidia faharoa tsara indrindra aorinan'ny Koreana.
Indianina isan-jato mitovy amin'izany no miteny an'io fiteny hafa io, Marathi. Na dia any India aza dia miteny manodidina Olona iray tapitrisa 72 inoana fa ny manampy tsy Indiana dia manodidina ny 90 tapitrisa ny fitambarany.
Ny Marathi dia miteny ao amin'ny fanjakan'i Goa, Daman, Maharashtra, Dadra, Diu, ary Nagar Haveli. Ny ankamaroan'ny teniny dia avy amin'ny Persiana, Urdu, ary Arabo. Ny tena manaitra, amin'izao fotoanan'ny fampidirana sy fanakianana ary fanavaozana amin'ny fiteny velona izao dia ny Marathi rafitra miralenta teloeny, tsy roa. Misy ny neuter izay sady tsy vehivavy no tsy lahy.
Tombanana fa misy Karana 61 tapitrisa miteny tamily, 6% amin'ny mponina nasionaly. Tamil no dinihina iray amin'ny fiteny velona tranainy indrindra eto an-tany, satria ny niandohany dia nalaina tamin'ny taona 500 talohan'i Kristy
Ny fiteny Tamil dia ampiasaina any amin'ny fanjakan'ny Andaman, ny nosy Nicobar, Tamil Nadi, Kerala, ary Puducherry.
Toa io fiteny io no miteny Olona iray tapitrisa 55, izay maneho ny 4% amin'ny mponina ao India. Inoana koa fa io no fiteny tranainy indrindra amin'ny firenena, na dia talohan'ny Tamil sy Sanskrit aza. Raha izany dia efa maherin'ny 2500 taona ...
Kannada dia miteny any amin'ny fanjakan'ny Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, ary Karnataka. I Kannada dia manana renisoratra 34 sy zanatsoratra 13 ary izy irery no fiteny indianina nanamboarana diksionera vahiny. I Ferdinand Kittel no tompon'andraikitra.
Ity fiteny ity dia niandohana tamin'ny sivilizasiôna Indo-Aryan afovoany ary maneho ny 5% amin'ny mponina ao India. Izany hoe Olona iray tapitrisa 52 manana an'io ho fiteny iray izy ireo. Re manerana ny India i Urdu fa indrindra any amin'ny fanjakan'i Bihar, Telangana, Delhi, Ottar Pradesh, Kashmir ary Jammu.
Ny mpanoratra Punjabi dia afaka mahatakatra ireo mpiteny Urdu, saingy ny mpandahateny Urdu dia tsy afaka, satria tsy mitovy ny ponolojia. Ny teny anglisy sasany dia avy amin'ny fiteny urdu, ohatra khaki o rivo-doza.
Heverina ho fiteny Dravidian izy io ary ampiasain'ny 4% amin'ny mponina ao India: izany hoe Olona 46 tapitrisa Inoana fa nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy rehefa nanomboka nampiasaina tamin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny kaonty amin'ny banky na taratasy sy antontan-taratasy.
Ahoana izany? Izany ve ny gujarati Io dia fifangaroan'ny fiteny telo, Gujarati tenany, Urdu ary Sindhi. Aiza ny kabary? Ao Dadra, Nagar Haveli, Daman, Diu ary Gujarat.
Toa ny ankamaroan'ny teny amin'ity fiteny ity dia mifarana amin'ny "am". Olona 33 tapitrisa no miteny azy ary izany dia maneho ny 3% amin'ny mponina ao amin'ny firenena. Afaka maheno izany any amin'ny fanjakan'i Kerala, Lakshadweep ary Puducherry ianao.
Raha ny marina, any Kerala dia misy distrika 14 ary samy mampiasa fitenim-paritra Malayalam ...
Ity dia fiteny iray hafa izay ampiasain'ny 3% amin'ny mponina Indiana, saingy tsy vitsy izany: Olona 32 tapitrisa Any atsinanan'ny firenena no tena itenenana azy, ao amin'ny Fanjakana Odisha, ambonin'ny Bay of Bengal.
Io no fiteny fahenina voatondro ho fiteny klasika any India, satria manana tantara lava ary tsy nifangaro firy tamin'ny fiteny hafa. Ny soratra tranainy indrindra amin'ny fankahalana dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK.
Ny marina izany ny ankamaroan'ny karana dia miteny amin'ny fiteny maro ary koa amin'ny teny anglisy, satria zanatany anglisy taloha izy ireo ary mandraka androany dia mbola fiteny ofisialy ny anglisy. Raha ny marina dia nanjary fiteny tetezana teo amin'ireo mponin'ny atsimo sy avaratry ny firenena izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fiteny manan-danja indrindra any India
salima dia hoy izy:
Hindou ny anarako, andriamanibavin'ny fitiavana sy fahendrena izy io, tsy haiko ny antony nanomezan'ny raiko ahy ahy.
Mamaly an'i salima
Salima avy any Panama aho, zara raha misy mponina telo tapitrisa ny fireneko, eto tsy misy ho ahy, fantatro fa any izy ireo na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao izay nifindra monina
juanita guadalipe dia hoy izy:
ke ray ny hevitra rehetra apetrakao !!!!!!!!!!!!!
Mamaly an'i juanita guadalipe
britni guadeloupe dia hoy izy:
Raha manampy ahy ny hevitrao, fa tiako ho fantatra hoe inona ny fitaovana ampiasaina hanaovana izany rehetra izany!
Mamaly an'i britni guadalupe
Carlos Guevara dia hoy izy:
Valiny tamin'i Carlos Guevara
Sakafom-pisakafoanana italiana mahazatra any Roma